Endrika sary: ​​inona avy ireo, karazana endrika sary | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 17/03/2021 08:27 | sary
Mazava ho azy fa mihoatra ny indray mandeha, eo am-pitetezana Internet, dia nahita endrika sary hafa tsy fantatrao ianao. Raha ny marina, vao tsy ela akory izay dia nahita fiovana ianao satria tao amin'ny motera fikarohana sary (Google, ohatra), rehefa mitahiry sary dia tsy nipoitra ilay jpg mahazatra, fa webp. Ary misy endrika sary maro.
fa, Inona avy ireo endrika sary? Firy ny isan'izy ireo? Ary iza no be mpampiasa indrindra? Androany, miresaka momba azy ireo isika.
1 Inona avy ireo endrika sary?
2 Karazana endrika endrika
2.8 Sarin-tsary: ​​EPS
2.9 Endrika endrika: BMP
2.10 Endrika hafa tsy dia fantatra loatra
Inona avy ireo endrika sary?
Ny endrika sary, fantatra koa amin'ny endrika fisie sary, dia fomba fitehirizana izany angona sary izany nefa tsy mila manery azy, na dia azo atao aza ny mangeja azy (very na tsia angona) na ovay ho lasa volo.
Raha fintinina dia miresaka a fisie nomerika mirakitra ny angona rehetra ilaina amin'ny famoronana sary. Pikantsary ity data ity, satria izy no mandrafitra ny sary. Ny tsirairay amin'ireo piksela ireo dia ahitàna bitika maromaro izay ampiasaina hamaritana ny lokon'ny sary. Noho izany, miankina amin'ny endrika, ny sary dia mety manana kalitao tsara kokoa na ratsy kokoa.
Karazana endrika endrika
Amin'ny Internet dia hitanao fa ny tena fahita matetika jpg (na jpeg), png na gif. Fa raha ny marina misy karazany maro ny endrika sary. Miresaka momba ny tsirairay amin'izy ireo izahay.
Amin'ireto fanafohezan-teny ireto, ilay tsy fantatrao dia tsy isalasalana fa ny farany, satria tsy mahazatra ny mahita azy amin'ny Internet. Na izany aza, izy rehetra dia manao fanovozan-kevitra amin'ny Vondron'ireo manam-pahaizana Photograghic, na inona no mitovy: JPEG.
Ny zavatra ataony dia ny mametaka sary very tahiry ka tsy milanja firy. Mba hanaovana izany dia mampiasa ny endrika JFIF, endrika fifanakalozana rakitra JPEG.
Ity no mahazatra indrindra amin'ny Internet ary mampiavaka ireto manaraka ireto:
Sary miloko 24-bit (mampiasa sombiny 8 isaky ny loko RGB (maitso, mena ary manga).
Famatrarana lossy (izay manampy amin'ny fanaovana kely kokoa).
Fanimbana taranaka. Izany hoe rehefa voahitsy sy voatahiry imbetsaka izy ireo dia very kalitao bebe kokoa.
Misy ny variant, izay antsoina hoe JPEG 2000. Mety hamela famoretana lossy na lossless nefa tsy dia fantatra loatra. Raha ny marina dia amin'ny fanovana sy fizarana sarimihetsika fotsiny no ampiasana azy, ohatra, ho an'ny sarimihetsika.
Ity anarana ity dia manondro Sarin-tsarimihetsika momba ny sary misy tag. Izy io dia endrika malefaka izay hitanao amin'ny Internet ho TIFF na TIF, na dia tsy dia mahazatra loatra aza izany.
Anisan'ireo fiasa ananany:
Afaka mamonjy sary voageja na misy fatiantoka.
Tsy tohanana amin'ireo mpitety tranonkala marobe.
Mitantana toerana manokana loko, toy ny CMYK, OCR, sns.
GIF, na endrika sary fifanakalozana sary dia iray amin'ireo endrika sary fampiasa matetika amin'ny famoronana sary mihetsikasatria ahafahanao mirakitra rakitra fisie mihetsika. Na izany aza, tsy natokana ho an'io izy io, ampiasaina amin'ny sary ihany koa satria mamintina tsy misy fatiantoka, izany hoe mitazona ny kalitaon'ny sary tahirizinao amin'ity endrika ity.
Izy io dia miavaka amin'ny fitehirizana ny fampahalalana rehetra momba ny sary eo amin'ny latabatra antsoina hoe ny loko misy loko, izay mety ahitana hatramin'ny 256 loko (8 bits). Mora hita amin'ny Internet izy ireo, na dia ampiasaina amin'ny logo aza (tsy misy fiaviana hahatonga azy ho mangarahara), sarimiaina, clip art, sns.
PNG mijoro ho an'ny Sary an-tserasera Tamin'ny voalohany dia tsy be mpampiasa (miresaka momba ny 1996 isika) fa izao dia afaka mahita sary sy sary mora miaraka amin'ity endrika ity ianao.
Anisan'ireo mampiavaka azy ireto:
Ataovy fangejana ny sary tsy misy fatiantoka.
Manolora halalin'ny loko hatramin'ny 24 bit (fa tsy ny 8 ohatra ny an'ny teo aloha).
Izy io dia manana fantsona alpha 32-bit.
Tsy afaka mamorona sarimiaina.
Manaiky mangarahara sy mangarahara.
ankehitriny Ampiasaina indrindra amin'ny sary sy sary, logo, sary tsy misy fatiantoka, sary mitaky mangarahara sns.
Ity karazana fisie ity no iray dia noforonina tamin'ny alàlan'ny Adobe Photoshop (na mitovy). Natao hamonjy ny sary misy kalitao avo indrindra io, nefa tsy hahavery ny asa vitanao. Raha ny marina, manana tombony izy io mamonjy ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny fanovana, ny sosona, ny style ... amin'ny fomba ahafahanao mamerina azy io any aoriana raha tsy resy lahatra amin'ny valiny ianao nefa tsy mila manomboka amin'ny voalohany.
Ny olana dia tsy afaka mahita ireo karazana sary ireo ianao ao anaty tranokala, afaka misokatra amin'ny programa manokana izy ireo hampandehanana azy ireo.
Ny endrika sary WebP dia iray amin'ireo tsy dia fantatra loatra, fa iray izay mety ho hitanao mora amin'ny Internet ankehitriny. Dia a endrika izay mamonjy ny sary miaraka amina famoretana ary tsy misy fatiantoka sary.
Ny tanjon'ity endrika ity dia ny hananana habe kely kokoa ka raha hiverenana dia haingana kokoa ny pejy. Namboarin'i Google, mifototra amin'ny rafitra VP8 intra-encoding ary misy kaontenera RIFF.
Ny SVG dia mijoro Scalable Vector Graphics. Izy io dia iray amin'ireo endrika sary hitanao fa maimaim-poana tanteraka ary mifantoka indrindra amin'ny vector. Toy ny amin'ny GIF, azonao atao koa ny mamelona sary vitsivitsy amin'ny SVG. Ny olana fotsiny dia ireo karazana endrika ireo mbola tsy zakan'ny tambajotra sosialy.
Ny EPS dia Encapsulated PostScript. Raha ny marina, dia endrika izay namorona Adobe, fa ny PDF kosa no nisolo azy.
Endrika endrika: BMP
BMP dia mijoro ho an'ny Bitmap. Izy io dia iray amin'ireo endrika izay nanomboka nampiasaina tamin'ny taona 90 ary niavaka tamin'ny fanaovana famatrarana tsy misy fatiantoka firy, izay midika fa ny haben'ny fisie tsirairay dia somary lehibe (ho setrin'izany dia tonga lafatra ny famahana ny sary).
Androany dia mbola ampiasaina io, na dia kely noho ny endrika sary hafa aza.
Endrika hafa tsy dia fantatra loatra
Ankoatra ireo efa noresahintsika ireo dia misy endrika sary hafa tsy dia malaza loatra, fa amin'ny lafiny ara-panatanjahan-tena dia azo ampiasaina bebe kokoa. Ireo dia:
Exif. Ity dia fisie mitovy amin'ny JPEG sy TIFF. Ny zavatra ataony dia ny firaketana ireo angona maro toa ny fakan-tsary, rehefa nalaina ny sary, ny fatran'ny fampisehoana, sns.
PPM, PGM, PBM na PNM.
Ny manta ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » sary » Formats sary